Tababaraha Faransiiska Didier Deschamps oo ugu baaqay Sakho in Janaayo uu isaga tago Liverpool – Gool FM
Tababaraha Faransiiska Didier Deschamps oo ugu baaqay Sakho in Janaayo uu isaga tago Liverpool
(Liverpool), 07 Nof 2016 –Tababaraha xulka Qaranka Faransiiska Didier Deschampes ayaa kula taliyay Ciyaaryahan Mamadou Sakho inuu isaga tago Liverpool Bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Laacibka Faransiiska Sakho ayaan ciyaarin kubadda cagta tan iyo markii lagu eedeeyay isticmaal daroogo bishii March ee la soo dhaafay, waxaana u xigtay in tababar Jurgen Klopp uusan soo xulan isla markaana ka reebay ciyaartoyda safka hore ee naadiga.
“Waa in la helaa xal kale, waana inuu helaa Sakho koox uu u ciyaaro Bisha January” ayuu yiri Deschamps.
Sakho oo 26 jir ah ayay UEFA ku weysay wax isticmaal daroogo ah, waxaana tuhunkaas dartiis u seegay ciyaarihii Euro 2016 ee lagu qabtay dalkiisa Faransiiska.
"Waan ku faraxsanahay inaan dib ugu soo laabto garoomada" - Luka Modric
RASMI: Aadan Gabyoow oo isaga tagay kooxda Jeenyo